एउटै अण्डकोष भएका हिटलरबारे नसुनिएका ५ तथ्य, सुन्दा जिब्रो टोक्नुहोला !
जर्मनीका तत्कालीन तानाशाह हिटलरको नाम नसुन्ने सायदै होलान । संसारलाई दोस्रो विश्वयुद्धतर्फ धकेल्ने हिटलर बारे विभिन्न रोचक तथ्यहरु बेलाबखत सुन्नमा आउँछन् । विभिन्न किसिमका दावी र निकै रोचक तथ्यहरु सार्वजनिक भइराख्छन् । हामीले हिटलरबारे ५ रोचक तथ्यको जानकारी दिँदैछौं, जुन कुरा तपाईंलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । यो भन्न त मुश्किल छ कि हिटलरको नाम सुन्दैमा कत्तिको दिमागमा घृणा र कत्तिको दिमागमा प्रेरणा उत्पन्न हुन्छ…विस्तृत समाचार »
​निकुञ्ज कर्मचारी हत्या गर्ने तीन जनालाई ३४ वर्ष कैद
२ भदौ चितवन, । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यरत कर्मचारी शेषचन्द्र चौधरीको हत्यामा संलग्न भएका तीन जनालाई जिल्ला अदालत चितवनले ३४ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । निकुञ्जका कर्मचारी शेषचन्द्रलाई निकुञ्जभित्रै २०७१ असोज ९ गते गोलीहानी हत्या गरिएको थियो । न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेका माडी अयोध्यापुरीस्थित बाँदरझुला– ९ का २७ वर्षीय जीवन प्रजा, १७ वर्षीय गिराज प्रजा र ३५ वर्षीय मानबहादुर…विस्तृत समाचार »
२ भदौ , काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को सभापतिमा नैनसिंह महर विजयी भएका छन्। भर्खरै सम्मपन्न सम्पनन्न मत परिणाम अनुसार १४३५ मत ल्याएर महर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी मनोजमणि आचार्यले १३१६ मत ल्याएका छन्। प्रदेश नम्वर १ बाट विकास केसी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश नम्वर २ बाट सञ्जय यादव उपाध्यक्ष भएका छन्। प्रदेश ४ बाट डिल्लीराम सुवेदी निर्वाचित भएका छन्।…विस्तृत समाचार »
सिपाहीकी स्वास्नी (कथा)
भुकभुके उज्यालो फैलियो टोलभरि । गह्रौँ मन बोकेर कमली ओछ्यानबाट जुरुक्क उठिन् । उनले बाटातिर खुल्ने सानो झ्यालमा कोठाभित्रको गतिविधि ढाक्ने उदेश्यले टाँगेको आफ्नो लुङ्गीको पर्दालाई उठाएर छेउतिर फर्काईन् । बाटामा मान्छेहरको गतिविधि बढिसकेको छ । पर्दा झारेर उनी पछाडि फर्किइन् । उनको ६ बर्षको छोरो रोहित र दुई बर्षकी छोरी रानू एकअर्काको अँगालोमा चेप्टिएर सुतेका छन् । “ए रोहित, रोहित । उठ् बाबू, दोकानमा…विस्तृत समाचार »
राजधानी कि लाजधानी !सडकको फोटोकथा
२ भदौ काठमाडौ यदि तपा्ई वालाजु देखि वाईपास हुदै नेपालटार जादै हुनुहुन्छ भने यो दृश्य सामान्य लाग्ने छ ।विस्तृत समाचार »
सपना पुरा नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकारले लेखे यस्तो कारुणीक पत्र !
के भनेर सम्बोधन गरु निकै अलमलमा परेको छु । त्यसैले तपाईलाई प्रिय भनेर सम्बोधन गर्दैछु । मेरो पेशा नै लेख्ने र जनतालाई देखाउने हो । त्यसैले आज समाचार नभएर एउटा पत्र लेख्दैछु कर्णालीको विकट जिल्ला डोल्पाको उराठ बस्तीबाट । तपाई पुष्पकमल भनु कि प्रचण्ड म निकै सकसमा छु । तपाईलाई यो डोल्पाको कथा पढ्न फुर्सद पक्कै पनि छैन । किनकी तपाईले डोल्पाको मात्रै होइन सिङगो…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 1036 1037 1038 1039 1040 Older Last ›